आठौं राष्ट्रिय खेलकुद : सदस्य सचिवको ठट्टा !
काठमाडौँ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुद खेलबाडमा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता ब्यक्त गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले लामो समयको रस्साकस्सीपछि २०७६ बैशाख ५ देखि ११ गतेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद प्रदेश नम्बर–५ मा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, त्यो निर्णयले कतिलाई असर पर्छ भन्ने हेक्का गर्न राखेप चुकेको खेलाडीहरू बताउछन् ।
त्यो समयमा आयोजनास्थल नेपालगञ्जमा अत्यन्त गर्मी हुने सम्भावना छ । त्यतिमात्र हैन बैशाख १५ देखि कक्षा १२ र त्यसको १५ दिनपछि कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा सुरु हुँदैछ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने करीब ७ हजार खेलाडीमध्ये कतिपयको परीक्षाको समय पर्ने भएकाले उनीहरूमा अनावश्यक दबाब थपिने निश्चित मानिएको छ ।
एकातिर खेलाडीहरू मानसिक दवावमा खेल्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कातिर प्रदेश–५ मा हुने खेलहरू सबै त्यही प्रदेशमा हुने छैनन् । राष्ट्रिय खेलकुद गर्नुको उद्देश्य नै बिर्सेर राखेपले हचुवामा आफ्ना योजना बनाएको आरोप लागेको छ । फरक फरक स्थानमा राष्ट्रिय खेलकुद गर्नुको उद्देश्य हो त्यो क्षेत्रको विकास । प्रदेश–५ मा राष्ट्रिय खेलकुद हुँदैछ भने विकास पनि त्यहीँकै हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार त्यहीँकै बन्नुपर्ने हो । मुस्किलले उद्घाटन र समापन गर्न मिल्ने रंगशाला नेपालगञ्जमा बन्दैछ ।
तर, दुर्भाग्य कतिपय खेलहरू प्रदेश–४ को पोखरा र प्रदेश–३ को काठमाडौं र भक्तपुरसम्म खेल हुनेछन् । यसले कसको भलो हुन्छ ? प्रतियोगिताको उद्घाटन २०७६ बैशाख ५ मा हुने भए पनि यही चैत २७ देखि नै खेलहरू सुरु हुनेछन् । ३५ खेलहरूमध्ये काठमाडौंमा हुने गल्फ र स्क्वास तथा पोखरामा हुने पाराग्लाइडिङसहित अन्य सामूहिक खेल यसै वर्ष सुरु हुनेछन् ।
पूर्वाधारमा निकै समय खर्चेको राखेपले बक्यौता रकमसमेत नतिरेकाले ढिलाई भइरहेको राखेप स्रोतले बताएको छ । त्यसैगरी प्रतियोगिता सञ्चालन खर्चका लागि समेत रकम निकासा नभएको बताइन्छ । रकमको कुरा गर्न खोज्दा राखेपका पदाधिकारीहरू तैंचुप मैंचुप रहने गरेको छन् गुनासो सुनिन्छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेप केन्द्र र प्रदेश पाँचका पदाधिकारीबीच साँठगाँठमा तलमाथि परेकाले राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनामा ढिलाइ भएको स्रोत बताउँछ ।
राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट भने गर्मीको विषय उठाउँदा ख्यालठट्टा गरेर विषय मोड्ने गर्दै आइरहेको आरोप छ । उनले बैशाखमा नेपालगञ्जमा धेरै गर्मी भएकाले खेलाडी खेल्न नसक्ने कुरा उठ्दा ‘नेपालगञ्ज नगएकाहरूलाई मात्र यसको चासो रहेको’ प्रतिक्रिया दिने गरेको बताइन्छ ।
एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘खेलाडीलाई समस्या छैन, प्रशिक्षकलाई समस्या छैन, पदाधिकारीलाई समस्या छैन तर विदेशमा बस्नेहरूलाई गर्मी र वर्षाको चिन्ता हुने गरेको छ ।’ उनले कसरी दोषारोपण गर्न सकिन्छ भनेर केही मिडिया लागेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
उनले हिमालबाट आएका र पहाडबाट नेपालगञ्ज पुग्ने खेलाडीलाई जतिसक्यो एसी संचालनको व्यवस्था गर्ने जनाएका छन् । नेपालगञ्जमात्र हैन बाँके, दाङ, कपिलबस्तु र रुपन्देहीमा पनि खेल हुने भएकाले त्यहाँ पनि गर्मीको समस्या हुने खेलाडीहरू बताउछन् ।
खेलाडी र खेलकुदका लागि प्रतिकूल वातावरण र मौसमका बारेमा कुरा उठ्दा सदस्यसचिव विष्टले भने ख्यालठट्टा गरेरै ढाकछोप गर्ने गरेको आरोप छ । पहिलोपल्ट संघीय संरचनाअनुसार खेलकुद आयोजना हुँदै गर्दा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को टोली पनि पहिलो पटक सहभागी हुँदैछरु। आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ७ प्रदेश, तीन विभागीय र एनआरएन गरी ११ टोलीको सहभागिता रहने छरु। एनआरएन टोलीमा ९ देशका २४ खेलाडी समावेश छन् ।
३५ खेलका करीब ७ हजार खेलाडीले २ हजार ६ सय ८७ पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । २०७५ मंसिरमा सुरु गर्ने भनिएको प्रतियोगितामा मन्त्रालय र राखेपबीच समन्वय हुन नसक्दा खेलाडीहरू मारमा पर्ने देखिन्छ । अर्कातिर काठमाडौंमै केही खेलहरू हुनु भनेको ती खेलको विकास प्रदेश–५ मा नहुने निश्चित हुनु हो ।
किनकि त्यहाँ त्यसको पूर्वाधान तयार हुने छैन । यसले गर्दा राष्ट्रिय खेलकुदको मर्ममाथि नै प्रहार हुने निश्चित छ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुद खेलबाडमा परिणत हुने चिन्ता त्यसैकारण ब्यक्त गर्न थालिएको छ ।